Suasua Onyankopɔn—Suasua Sɛnea Ofi Ɔdɔ mu De ne Tumi Di Dwuma No | Bɛn Yehowa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chiyao Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
‘Suasua Onyankopɔn’ Wɔ Sɛnea Wode Tumi Di Dwuma no Mu
1. Anifere kwan so afiri bɛn na ɛnkyɛ na nnipa a yɛnyɛ pɛ no atɔ mu?
“TUMI biara nni hɔ a anifere kwan so afiri bi mmata ho.” Saa nsɛm a afeha a ɛto so 19 no mu anwensɛm kyerɛwfo bi kae no twe adwene si asiane a ahintaw bi so: tumi a wɔde di dwuma ɔkwammɔne so. Awerɛhosɛm ne sɛ, ɛnkyɛ koraa na nnipa a yɛnyɛ pɛ nyinaa atɔ saa afiri yi mu. Nokwarem no, wɔ abakɔsɛm nyinaa mu no, ‘onipa adi onipa so tumi ma adan no bɔne.’ (Ɔsɛnkafo 8:9) Tumi a wɔmfa nni dwuma ɔdɔ mu no ama nnipa ahu amane pii.
2, 3. (a) Dɛn na ɛda nsow wɔ sɛnea Yehowa de ne tumi di dwuma no ho? (b) Dɛn na ebetumi aka yɛn tumi ho, na ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yɛde tumi a ɛte saa nyinaa di dwuma?
2 Nanso, so ɛnyɛ nwonwa sɛ Yehowa Nyankopɔn a ɔwɔ tumi a enni ano no mfaa saa tumi no nnii dwuma ɔkwammɔne so da? Sɛnea yɛahu wɔ ti ahorow a edi kan mu no, ɔde ne tumi di dwuma bere nyinaa​—sɛ́ ɛyɛ adebɔ mu, adesɛe mu, ahobammɔ mu, anaa ade siesie mu​—ma ɛne n’atirimpɔw ahorow a ɔdɔ wom no hyia. Sɛ yesusuw ɔkwan a ɔfa so de ne tumi di dwuma no ho a, ɛka yɛn ma yɛbɛn no. Ɛno nso betumi akanyan yɛn ma ‘yɛasuasua Onyankopɔn’ wɔ sɛnea yɛn ankasa de tumi di dwuma no mu. (Efesofo 5:1) Nanso, tumi bɛn na yɛn nnipa a yɛyɛ mmerɛw no wɔ?
3 Kae sɛ wɔbɔɔ onipa wɔ “Onyankopɔn suban so” sɛ ne sɛso. (Genesis 1:​26, 27) Enti, yɛn nso yɛwɔ tumi​—anyɛ yiye koraa no, yɛwɔ kakra. Yɛn tumi no bi betumi ayɛ ahoɔden a yɛwɔ a yɛde yɛ nneɛma, nea yɛde yɛ adwuma; afoforo so tumi a yɛwɔ; afoforo so nkɛntɛnso a yetumi nya, titiriw yɛn adɔfo; honam fam ahoɔden; anaa honam fam nneɛma. Odwontofo no ka faa Yehowa ho sɛ: “Wo nkyɛn na nkwa nsuti wɔ.” (Dwom 36:9) Enti, ɔkwan biara so no, Onyankopɔn na ɔyɛ tumi a ɛfata biara a yɛwɔ no wura. Enti yɛpɛ sɛ yɛde di dwuma wɔ ɔkwan a ɛsɔ n’ani so. Ɔkwan bɛn so na yebetumi ayɛ saa?
Ɔdɔ Ne Ade Titiriw
4, 5. (a) Dɛn ne ade a ɛho hia a ɛbɛma yɛde tumi adi dwuma ɔkwampa so, na ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn ankasa nhwɛso da eyi adi? (b) Ɔkwan bɛn so na ɔdɔ bɛboa yɛn ma yɛde yɛn tumi adi dwuma ɔkwampa so?
4 Ade a ɛho hia a ɛbɛma yɛde tumi adi dwuma ɔkwampa so ne ɔdɔ. So Onyankopɔn ankasa nhwɛso nna eyi adi? Kae Onyankopɔn su atitiriw anan​—tumi, atɛntrenee, nyansa, ne ɔdɔ​—a yesusuw ho wɔ Ti 1 no. Su atitiriw anan no mu nea ɛwɔ he na edi akoten? Ɔdɔ. “Onyankopɔn ne dɔ,” saa na 1 Yohane 4:8 ka. Yiw, Yehowa su titiriw ne ɔdɔ; ɛno na ɛma ɔyɛ biribiara a ɔyɛ no nyinaa. Enti ɔdɔ na ɛma ɔda ne tumi adi bere biara, na wɔn a wɔdɔ no no nya so mfaso ankasa.
5 Ɔdɔ bɛboa yɛn nso ma yɛde yɛn tumi adi dwuma ɔkwampa so. Efisɛ, Bible ka kyerɛ yɛn sɛ ɔdɔ “yam ye” na “ɛnhwehwɛ nea ɛyɛ n’ankasa de.” (1 Korintofo 13:​4, 5) Enti, ɔdɔ remma yɛnyɛ yɛn ade katee anaa atirimɔden so wɔ wɔn a yɛwɔ wɔn so tumi bi no so. Mmom no, yebedi afoforo ni na yɛde wɔn ahiade ne wɔn nkate adi yɛn ankasa de anim.​—Filipifo 2:​3, 4.
6, 7. (a) Dɛn ne Onyankopɔn suro, na dɛn nti na saa su yi bɛboa yɛn ma yɛakwati sɛ yɛde yɛn tumi bedi dwuma ɔkwammɔne so? (b) Yɛ mfatoho fa kyerɛ abusuabɔ a ɛwɔ suro a yesuro sɛ yɛrenyɛ ade a ɛnsɔ Onyankopɔn ani ne ɔdɔ a yɛdɔ Onyankopɔn no mu.
6 Su foforo wɔ hɔ a ɛne ɔdɔ wɔ abusuabɔ a ebetumi aboa yɛn ma yɛakwati sɛ yɛde tumi bedi dwuma ɔkwammɔne so: ɛne Onyankopɔn suro. Mfaso bɛn na ɛwɔ saa su yi so? Mmebusɛm 16:6 ka sɛ: “Wɔde [Yehowa, NW] suro kwati bɔne.” Akyinnye biara nni ho sɛ tumi a wɔde di dwuma ɔkwammɔne so no ka nneɛma bɔne a ɛsɛ sɛ yɛtwe yɛn ho fi ho no ho. Onyankopɔn suro remma yɛnyɛ wɔn a yɛwɔ wɔn so tumi no basabasa. Dɛn ntia? Ade biako ne sɛ, yenim sɛ yebebu akontaa akyerɛ Onyankopɔn wɔ sɛnea yɛne saafo no di no ho. (Nehemia 5:​1-7, 15) Nanso, pii wɔ Onyankopɔn suro mu sen saa. Wɔtaa de mfitiase kasa mu nsɛm a wɔde gyina hɔ ma “osuro” no kyerɛ obu ne nidi a emu dɔ a yɛwɔ ma Nyankopɔn. Enti Bible no de osuro bata ɔdɔ a wɔdɔ Onyankopɔn ho. (Deuteronomium 10:​12, 13) Nea ɛka osuro a emu dɔ yi ho ne osuro pa a ɛne sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ biribi a ɛnsɔ Onyankopɔn ani​—na ɛnyɛ nea ebefi mu aba nti na mmom esiane ɔdɔ ankasa a yɛdɔ no nti.
7 Mfatoho bi ni: Susuw abusuabɔ a ɛfata a ɛda abarimaa kumaa ne n’agya ntam no ho hwɛ. Abarimaa no hu sɛnea n’agya dɔ no na n’ani gye ne ho no. Nanso, abarimaa no nim nea n’agya hwehwɛ fi ne hɔ, na onim sɛ sɛ wanyɛ n’ade yiye a, n’agya bɛteɛ no so. Abarimaa no nsuro n’agya wɔ ɔkwan a ɛmfata so. Mmom no, ɔdɔ n’agya yiye. Abofra no ani gye ho sɛ ɔbɛyɛ biribi a ɛbɛma n’agya ani agye ne ho. Saa ara na ɛte wɔ Onyankopɔn suro ho. Esiane sɛ yɛdɔ Yehowa, yɛn soro Agya no nti, yesuro sɛ yɛbɛyɛ biribi a ‘ɛbɛyɛ no yaw ne komam.’ (Genesis 6:6) Mmom no, yɛpɛ sɛ ne koma ani gye. (Mmebusɛm 27:​11) Ɛno nti na yɛpɛ sɛ yɛde yɛn tumi di dwuma ɔkwampa so no. Ma yɛnhwehwɛ ɔkwan a yebetumi afa so ayɛ saa no yiye.
Abusua no Mu
8. (a) Tumi bɛn na okununom wɔ wɔ abusua no mu, na ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ wodi ho dwuma? (b) Ɔkwan bɛn so na okunu betumi ada no adi sɛ odi ne yere ni?
8 Nea edi kan no, susuw abusua ho hwɛ. Efesofo 5:​23 ka sɛ: “Okunu yɛ ɔyere ti.” Ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ okunu de tumi yi a wɔde ama no no di dwuma? Bible ka kyerɛ okununom sɛ wɔne wɔn yerenom ntra ‘nimdeɛ mu, na wonni wɔn ni sɛ ade a ne ho nyɛ den.’ (1 Petro 3:7) Hela edin asɛm a wɔkyerɛɛ ase ‘nidi’ no kyerɛ “ɛbo a biribi som, . . . obu.” Wɔkyerɛ asɛmfua yi ase sɛ ‘akyɛde’ ne “aboɔden.” (Asomafo no Nnwuma 28:​10; 1 Petro 2:7) Okunu a odi ne yere ni no renhwe no da; saa ara na ɔrengu n’anim ase anaasɛ ɔremmu no animtiaa, mma ɔnte nka sɛ mfaso nni ne so. Mmom no, ohu ne so mfaso, na obu no. Ɔnam ne nsɛm ne ne nneyɛe so da no adi​—wɔ kokoam ne baguam​—sɛ ɔsom bo ma no. (Mmebusɛm 31:​28) Ɛnyɛ ɔdɔ nko na ɔyere no bɛdɔ okunu a ɔte saa no, na mmom obebu no nso, na nea ɛho hia sen saa koraa no, ɔbarima no benya Onyankopɔn anim dom.
Sɛ okununom ne ɔyerenom dodɔ wɔn ho kyerɛ obu ma wɔn ho a, wɔde wɔn tumi di dwuma ɔkwampa so
9. (a) Tumi bɛn na ɔyerenom wɔ wɔ abusua mu? (b) Dɛn na ebetumi aboa ɔyere bi ma ɔde ne dom akyɛde ahorow adi dwuma aboa ne kunu, na dɛn na ebefi mu aba?
9 Ɔyerenom nso wɔ tumi bi wɔ abusua mu. Bible ka mmea a wosuro Onyankopɔn a na wɔhyɛ tiyɛ a ɛfata ase a wɔde hokwan a wɔwɔ hyɛɛ wɔn kununom nkuran ɔkwampa so anaasɛ wɔboaa wɔn ma wotumi buu atɛmpa ho asɛm. (Genesis 21:​9-12; 27:​46–28:2) Ebia na ɔyere bi adwene kyere ade ntɛm sen ne kunu, anaasɛ obetumi anya ɔdom akyɛde foforo a ne kunu nni bi. Nanso, ɛsɛ sɛ “ɔfɛre” ne kunu na ɔbrɛ ne ho ase ma no ‘sɛnea ɔyɛ ma Awurade.’ (Efesofo 5:​22, 33) Adwene a ɔyere benya sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɔ Onyankopɔn ani no bɛboa no ma ɔde nneɛma a otumi yɛ aboa ne kunu mmom sen sɛ obebu no animtiaa anaasɛ ɔbɛbɔ mmɔden sɛ obedi no so. “Ɔbea nyansafo” a ɔte saa no ne ne kunu yɛ biako hyɛ abusua no den. Ɔnam saayɛ so ma asomdwoe ba ɔne Onyankopɔn ntam.​—Mmebusɛm 14:1.
10. (a) Tumi bɛn na Onyankopɔn de ama awofo? (b) Asɛmfua “nteɛso” kyerɛ dɛn, na ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ wɔde ma? (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.)
10 Awofo nso wɔ tumi a Onyankopɔn de ama wɔn. Bible tu wɔn fo sɛ: “Agyanom, munnyi mo mma abufuw, na mmom monyɛn wɔn [Yehowa nteɛso, NW] ne nyansakyerɛ mu.” (Efesofo 6:4) Wɔ Bible mu no, asɛmfua “nteɛso” betumi akyerɛ ‘ɔyɛn, ntetee, ne nkyerɛkyerɛ.’ Mmofra hia nteɛso; wohia akwankyerɛ ne anohyeto ahorow a emu da hɔ. Bible de ɔdɔ bata nteɛso, anaa nkyerɛkyerɛ a ɛte saa ho. (Mmebusɛm 13:​24) Enti, ɛnsɛ sɛ wɔde “nteɛso abaa” di dwuma ɔkwammɔne so​—nkate fam anaa honam fam da. * (Mmebusɛm 22:​15; 29:​15) Nteɛso a ɛyɛ katee anaa emu yɛ den a ɔdɔ nnim yɛ awofo tumi a wɔde di dwuma ɔkwammɔne so, na ebetumi asɛe abofra anigye. (Kolosefo 3:​21) Nanso, nteɛso a ɛkari pɛ a wɔde ma ma mmofra hu sɛ wɔn awofo dɔ wɔn na wodwen nnipa ko a wɔrebɛyɛ no ho.
11. Ɔkwan bɛn so na mmofra betumi de wɔn tumi adi dwuma ɔkwampa so?
11 Mmofra nso ɛ? Ɔkwan bɛn so na wobetumi de wɔn tumi adi dwuma ɔkwampa so? Mmebusɛm 20:​29 ka sɛ: “Mmerante anuonyam ne wɔn ahoɔden.” Nokwarem no, ɔkwampa biara nni hɔ a mmofra betumi afa so de wɔn ahoɔden adi dwuma sen sɛ wɔde bɛsom yɛn ‘Bɔfo Kɛse’ no. (Ɔsɛnkafo 12:1) Ɛsɛ sɛ mmofra kae sɛ wɔn nneyɛe betumi aka wɔn awofo. (Mmebusɛm 23:​24, 25) Sɛ mmofra tie wɔn awofo a wosuro Onyankopɔn no, na wɔfa ɔkwantrenee so a, wɔma wɔn awofo koma ani gye. (Efesofo 6:1) Nneyɛe a ɛte saa ‘sɔ Awurade ani.’​—Kolosefo 3:20.
Asafo no Mu
12, 13. (a) Adwene bɛn na ɛsɛ sɛ mpanyimfo nya wɔ tumi a wɔwɔ wɔ asafo mu no ho? (b) Kyerɛkyerɛ nea enti a ɛsɛ sɛ mpanyimfo yɛ nguan no brɛbrɛ no mu.
12 Yehowa ama yɛn ahwɛfo a wodi anim wɔ Kristofo asafo no mu. (Hebrifo 13:​17) Ɛsɛ sɛ mmarima a wɔfata yi de tumi a Onyankopɔn de ama wɔn no di dwuma de mmoa a ɛho hia ma nguan no, na wɔhwɛ ma wodi yiye. So mpanyimfo no gyinabea ma wɔn kwan sɛ wonni wɔn mfɛfo gyidifo so bakoma? Dabida! Ɛsɛ sɛ mpanyimfo no nya dwuma a wodi wɔ asafo no mu no ho adwene a ɛkari pɛ. (1 Petro 5:​2, 3) Bible ka kyerɛ ahwɛfo sɛ: ‘Monyɛn Onyankopɔn asafo a ɔde n’ankasa ne Ba mogya anya wɔn no yiye.’ (Asomafo no Nnwuma 20:​28) Eyi yɛ asɛm a emu yɛ den a enti ɛsɛ sɛ wɔyɛ nguan no mu biara brɛbrɛ.
13 Yebetumi akyerɛkyerɛ mu wɔ saa kwan yi so. Obi a ɔyɛ w’adamfo paa de n’agyapade bi a onni ho agoru koraa ama wo sɛ hwɛ so ma no. Wunim sɛ w’adamfo no tɔɔ no aboɔden. So worenyɛ no brɛbrɛ na wonhwɛ so yiye? Saa ara na Onyankopɔn ama mpanyimfo no asɛyɛde sɛ wɔnhwɛ agyapade bi a ɛsom bo yiye so: asafo no a wɔde emufo toto nguan ho no. (Yohane 21:​16, 17) Yehowa dɔ ne nguan yiye​—ɔdɔ wɔn araa ma ɔde ne Dɔba a ɔwoo no koro, Yesu Kristo, mogya a ne bo yɛ den tɔɔ wɔn. Ná Yehowa ntumi ntɔ ne nguan no aboɔmmerɛw. Mpanyimfo a wɔwɔ ahobrɛase ma ɛno tra wɔn adwenem, na wɔne Yehowa nguan no di wɔ ɔkwan a ɛfata so.
‘Tumi a Tɛkrɛma Wɔ’
14. Tumi bɛn na tɛkrɛma wɔ?
14 Bible ka sɛ: “Owu ne nkwa wɔ tɛkrɛma nsam.” (Mmebusɛm 18:​21) Nokwarem no, tɛkrɛma betumi asɛe ade pii. Yɛn mu hena na obi nkaa asɛnhunu anaa asɛm a ɛkyerɛ animtiaabu mma ɛnhyee no da? Nanso, tɛkrɛma wɔ tumi a ɛde yɛ ade yiye nso. Mmebusɛm 12:​18 ka sɛ: “Onyansafo tɛkrɛma sa yare.” Yiw, nsɛm a ɛhyɛ nkuran na ɛho tew betumi ayɛ sɛ nkũ a wɔde sra koma ho ma edwo fɔmm. Susuw nhwɛso bi ho hwɛ.
15, 16. Akwan bɛn so na yebetumi de tɛkrɛma ahyɛ afoforo nkuran?
15 Tesalonikafo Nhoma a Edi Kan 5:​14 hyɛ yɛn nkuran sɛ: “Monkyekye wɔn a wɔn koma atu werɛ.” Yiw, ɛtɔ mmere bi a Yehowa asomfo anokwafo mpo betumi ahyia adwenemhaw. Ɔkwan bɛn so na yebetumi aboa saafo no? Fi komam ka biribi pɔtee kamfo wɔn na ɛmmoa wɔn mma wonhu sɛnea wɔsom bo ma Yehowa no. Ka Bible mu nsɛm a tumi wom kyerɛ wɔn sɛ Yehowa dwen wɔn a wɔn “koma abubu” na wɔn “honhom apɛtɛw” no ho na ɔdɔ wɔn. (Dwom 34:​18) Sɛ yɛde tumi a tɛkrɛma wɔ no di dwuma de kyekye afoforo werɛ a, na yɛreda no adi sɛ yɛresuasua yɛn Nyankopɔn mmɔborohunufo a “ɔkyekye wɔn a wɔn koma atu werɛ no.”​—2 Korintofo 7:​6, New American Standard Bible.
16 Yebetumi de tumi a yɛn tɛkrɛma wɔ no adi dwuma nso de nkuranhyɛ a ɛho hia pii ama afoforo. So yɔnko gyidini bi dɔfo awu? Nsɛm a ɛda tema adi a yɛbɛka de akyerɛ sɛ yedwen ne ho no betumi akyekye nea ne werɛ ahow no werɛ. So onua anaa onuawa bi a ne mfe akɔ anim te nka sɛ ne ho nhia? Nsɛm a aba wom betumi ama wɔn a wɔn mfe akɔ anim no anya ahotoso sɛ wɔn ho hia na yɛn ani sɔ wɔn. So yare a enni sabea rehaw obi? Nsɛm a ɛda ayamye adi a wo ne no bɛka wɔ telefon so anaasɛ ne nkyɛn a wobɛkɔ no betumi ayɛ pii akanyan ɔyarefo no anigye. Sɛ yɛde tumi a kasa wɔ no di dwuma de ka nsɛm a “ɛma nkɔso” a, hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ ɛma yɛn Bɔfo no ani gye!​—Efesofo 4:29.
Asɛmpa no a yɛbɛka bi​—ɛyɛ ɔkwan a eye kyɛn so a yɛbɛfa so de yɛn tumi adi dwuma
17. Ɔkwan titiriw bɛn so na yebetumi de yɛn tɛkrɛma adi dwuma ma afoforo anya so mfaso, na dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa?
17 Ɔkwan foforo biara nni hɔ a ɛho hia a yebetumi de tumi a tɛkrɛma wɔ no adi dwuma sen sɛ yɛde bɛka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa akyerɛ afoforo. Mmebusɛm 3:​27 ka sɛ: “Mfa yiyeyɛ nkame nea ɛsɛ no, bere a ɛwɔ wo tumi mu sɛ wobɛyɛ no.” Ɛyɛ yɛn asɛyɛde sɛ yɛka asɛmpa a egye nkwa no kyerɛ afoforo. Ɛrenyɛ papa sɛ yɛbɛkora asɛm a egye ntɛmpɛ a Yehowa afi ayamye kɛse mu de ama yɛn no so. (1 Korintofo 9:​16, 22) Nanso, ɛhe na Yehowa hwɛ kwan sɛ yebenya adwuma yi mu kyɛfa akodu?
Yɛn “Ahoɔden Nyinaa” a Yɛde Bɛsom Yehowa
18. Dɛn na Yehowa hwɛ kwan sɛ yɛbɛyɛ?
18 Ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa no ka yɛn ma yɛde yɛn ho hyɛ Kristofo som adwuma no mu kɛse. Dɛn na Yehowa hwɛ kwan sɛ yɛbɛyɛ wɔ eyi mu? Biribi a yɛn nyinaa, a tebea a yɛwom wɔ asetram mfa ho, betumi ayɛ: “Adwuma biara a moyɛ no, mumfi ɔkra mu nyɛ no sɛ moyɛ ma [Yehowa, NW] na monyɛ mma nnipa.” (Kolosefo 3:​23) Bere a Yesu reka mmara a ɛyɛ kɛse sen biara ho asɛm no, ɔkae sɛ: “Dɔ [Yehowa, NW] wo Nyankopɔn fi wo koma nyinaa mu ne wo kra nyinaa mu ne w’adwene nyinaa mu ne w’ahoɔden nyinaa mu.” (Marko 12:​30) Yiw, Yehowa hwɛ kwan sɛ yɛn mu biara bɛdɔ no na yɛafi ɔkra nyinaa mu asom no.
19, 20. (a) Bere a koma, adwene, ne ahoɔden yɛ ɔkra fã no, dɛn nti na wɔbobɔɔ saa nneɛma foforo yi din wɔ Marko 12:​30? (b) Ɔkra nyinaa mu a yebefi asom Yehowa no kyerɛ dɛn?
19 Dɛn na ɔkra nyinaa mu a yebefi asom Nyankopɔn no kyerɛ? Ɔkra gyina hɔ ma onipa mũ no nyinaa, a nipadua ne nneɛma a adwene tumi yɛ nyinaa ka ho. Bere a koma, adwene, ne ahoɔden yɛ ɔkra fã no, dɛn nti na wɔbobɔɔ nneɛma foforo yi din wɔ Marko 12:​30? Susuw mfatoho bi ho hwɛ. Wɔ Bible mmere mu no, na onipa tumi tɔn ne ho (ne kra) kɔ nkoasom mu. Nanso, ebetumi aba sɛ na akoa no remfi ne koma nyinaa mu nsom ne wura no; ebetumi aba sɛ ɔremfa n’ahoɔden nyinaa anaa n’adwene nyinaa nyɛ adwuma mma ne wura nneɛma nnya nkɔso. (Kolosefo 3:​22) Enti, ɛda adi sɛ Yesu bobɔɔ saa nneɛma foforo yi din de sii so dua sɛ ɛnsɛ sɛ yɛtwentwɛn yɛn nan ase wɔ biribiara ho wɔ Onyankopɔn som mu. Nea ɔkra nyinaa mu a yebefi asom Onyankopɔn kyerɛ ne sɛ yɛde yɛn ho bɛma, de yɛn ahoɔden nyinaa ayɛ adwuma sɛnea yebetumi koraa wɔ ne som adwuma mu.
20 So ɔkra nyinaa mu a yebefi asom no kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa de bere ne ahoɔden koro na ɛyɛ ɔsom adwuma no? Ɛrentumi nyɛ yiye saa, efisɛ ɛsono onipa biara nsɛm tebea ne nneɛma a ɔbɔ mu mmɔden. Sɛ nhwɛso no, aberante anaa ababaa a ɔte apɔw na otumi yɛ adwuma kyɛ no betumi de bere pii ayɛ asɛnka adwuma no asen obi a onyin ama n’ahoɔden so atew. Ɔhokwafo a ɔyɛ aberante anaa ababaa a onni abusua mu asɛyɛde ahorow no betumi ayɛ pii asen obi a ɔhwɛ abusua. Sɛ yɛwɔ ahoɔden na yɛn nsɛm tebea ma yetumi yɛ pii wɔ ɔsom adwuma no mu a, hwɛ sɛnea ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani gye! Nokwarem no, yɛmpɛ sɛ yɛbɛkasa atia afoforo de yɛn ho atoto wɔn ho wɔ eyi mu. (Romafo 14:​10-12) Mmom no, yɛpɛ sɛ yɛde yɛn ahoɔden yɛ adwuma de hyɛ afoforo nkuran.
21. Dɛn ne ɔkwan a eye na ɛho hia sen biara a yebetumi afa so de yɛn tumi adi dwuma?
21 Yehowa ayɛ nhwɛso a ɛyɛ pɛ wɔ sɛnea ɔde ne tumi di dwuma ɔkwampa so no mu ama yɛn. Yɛpɛ sɛ yesuasua no sɛnea yebetumi sɛ́ nnipa a yɛnyɛ pɛ. Yebetumi de yɛn tumi adi dwuma ɔkwampa so denam wɔn a yɛwɔ wɔn so tumi a yɛne wɔn bedi no nidi mu no so. Afei nso, yɛpɛ sɛ yɛde yɛn kra nyinaa yɛ adwuma a egye nkwa a Yehowa de ama yɛn sɛ yɛnyɛ no. (Romafo 10:​13, 14) Kae sɛ, sɛ woyɛ nea wo​—wo kra​—betumi nyinaa a, Yehowa ani gye ho. So wo koma nka wo mma wunnya ɔpɛ sɛ wobɛyɛ nea wubetumi nyinaa de asom Onyankopɔn a ɔwɔ ntease ne ɔdɔ saa no? Ɔkwan foforo biara nni hɔ a eye anaa ɛho hia sen saa a wobɛfa so de wo tumi adi dwuma.
^ nky. 10 Wɔ Bible mmere mu no, na Hebri asɛmfua “abaa” kyerɛ dua anaa poma, te sɛ nea oguanhwɛfo de ka ne nguan no. (Dwom 23:4) Saa ara na awofo tumi a ɛne “abaa” no kyerɛ akwankyerɛ a ɔdɔ wom, ɛnyɛ asotwe a ɛyɛ katee anaa nea wɔde ma atirimɔden so.
Mmebusɛm 3:​9, 10 ‘Ahonyade’ bɛn na yɛwɔ, na ɔkwan bɛn so na yebetumi de nneɛma yi adi dwuma de ahyɛ Yehowa anuonyam?
Ɔsɛnkafo 9:​5-10 Dɛn nti na ɛsɛ sɛ wode w’ahoɔden di dwuma mprempren wɔ ɔkwan a Onyankopɔn ani begye ho so?
Asomafo no Nnwuma 8:​9-​24 Tumi a wɔde di dwuma ɔkwammɔne so ho asɛm bɛn na wɔka wɔ ha, na ɔkwan bɛn so na yebetumi akwati bɔne a ɛte saa a yɛbɛyɛ no?
Asomafo no Nnwuma 20:​29-38 Dɛn na wɔn a asɛyɛde hyehyɛ wɔn nsa wɔ asafo no mu no betumi asua afi Paulo nhwɛso no mu?